Vungle: manaova vola amin'ny Internet App-nao | Martech Zone
Vungle: volao amin'ny Internet ny fampiharana findainao
Talata, Febroary 7, 2017 Talata, Febroary 7, 2017 Douglas Karr
Ny habaka fampiharana finday dia fifaninanana iray ary ny andro famoronana fampiharana, ny famoahana vola vitsivitsy, ary ny fanantenana ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola dia ao aorianay indrindra amin'ny ankamaroan'ny indostria. Na izany aza, ny fividianana fampiharana sy dokam-barotra amin'ny fampiharana dia manohy manampy amin'ny famerenam-bola ny fampanjariam-bola tsy mampino izay ampiasain'ny mpanamboatra lalao sy finday.
Vungle dia iray amin'ireo mpitarika ao amin'ity indostria ity, manome SDK mahery ho an'ireo mpanonta amin'ny doka horonantsary ifanakalozana mba hitadiavana vola amin'ny fampiharana azy ireo, ary manome fotoana ahafahan'ny mpanao dokambarotra an-tsary manatona mpijery finday miasa. Ny sasany amin'ireo mpanjifany dia nahita fiakarana 10x monetization.
Ny mpanao dokam-barotra dia miankina amin'ny teknolojia fanatsarana ny famoronana nataon'i Vungle, ny fikendreny ary ny fandefasana doka horonantsary HD hahatratra sy hahazoana mpampiasa manana sanda ambony manerantany. Ny mpanonta ambony dia miankina amin'i Vungle mba hampandeha doka horonan-tsary mifandraika izay manatsara ny traikefan'ny mpampiasa, mampitombo ny fifandraisan'ny mpampiasa ary mampidi-bola kokoa. Vungle dia mitana ny laharana faha # 1 amin'ny fitazonana ny mpampiasa sehatra hafa amin'ny alàlan'ny indostrian'ny fampisehoana finday indostrialy.
Vungle dia nanangona fijerena horonantsary 2.5 tapitrisa manerana ny rindranasa finday miisa 20,000 miaraka amin'ny fomba fampifangaroany amin'ny fampidirana doka horonantsary ho lasa zavatra niainan'ny mpampiasa teratany.
Ny tale jeneraly Zain Jaffer dia nanangana ny orinasa tamin'ny 2011 ary nanitatra azy eran'izao tontolo izao tao anatin'ny dimy taona. Raha ny marina dia fisian'ny manan-danja ao Shina (sy ny faritra APAC midadasika kokoa, momba an'io), ary miasa miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny developer sy ny mpanao dokam-barotra toa an'i Zynga, EA, Smule, Google, Honda, Allstate, L'oreal, Coca-Cola ary Nissan, Ankoatra ny hafa.
Vungle dia manolotra ny mpanao dokam-barotra amin'ny fahaizana:
Fitsapana A / B ny famoronana anao amin'ny fotoana tena izy manerana ny fampiharana anao.
Mandrosoa haingana ireo mpampiasa hanao hetsika tadiavina karatra famaranana fifandraisana amin'ny unitanao.
Manapaha hevitra hoe aiza no ahitan'ny mpampiasa anao doka fametahana doka malefaka.
Amin'ny famoahana horonantsary anaty fampiharana amin'ny rindranasa mifandraika amin'izany, Vungle dia afaka mampitombo ny fahazoana mpampiasa sy ny fametrahana finday hafa amin'ny alàlan'ny fikendrena ireo mpihaino sy fampiharana mitovy amin'izany amin'ny alàlan'ny fividianana doka fandaharana. Vungle dia manolotra fifanakalozana doka sy tsena tsy miankina mba hahatratra ny mpijery premium amin'ny fampiharana mafana indrindra.
Sintomy ny SDK an'i Vungle
Tags: Androidpaomadoka horonantsary anaty lalaodoka horonantsary mifandrayiOSMicrosoftfifanakalozana doka amin'ny findaydoka amin'ny findayfividianana fandaharanahoronantsary fandaharanafividianana doka horonantsary fandaharanadoka video
Lokista: Avoahy, Tantano ary Ampandriso ny hetsikao amin'ny Internet